2019 nke kachasị ewu ewu Peptide Degarelix: Ọgwụ A Na-eji Maka Ọrịa Cancer Prostate
1. Gịnị bụ Degarelix?
2. Kedu ihe eji Degarelix ntụ ntụ mee?
3. Degarelix ntụ ntụ nke usoro
4. Mmekorita nke Degarelix
5. Onwere ihe egwu obula ma oburu na m raara Degarelix ma obu inyebiga ya oke?
6. Kedu mmetụta na ịdọ aka ná ntị dị a Sideaa ka Degarelix Na-akpata?
8. Ozi ndị ọzọ
N'oge a, ọrịa cancer bụ otu n'ime ọrịa na-eyi egwu ahụike na ụbụrụ mmadụ. Mkpa na ọgwụgwọ dị mkpa iji gwọọ ọrịa a. Degarelix ntụ ntụ bụ ọgwụ dị irè maka ọgwụgwọ nke ọrịa kansa, yana anyị kwesịrị ibido ụzọ ịghọta ụfọdụ ozi dị mkpa banyere ya ka anyị wee nwee ike iji ya nke ọma na nchekwa ọfụma.
Degarelix (214766-78-6) bụ ọgwụ ọgwụgwọ ọgwụ na-ebelata ntakịrị homonụ na ahụ, gụnyere testosterone. Edebere ya n'okpuru usoro ọgwụ a maara dị ka gonadotropin na-ahapụ ndị na-anabata antagonists (GnRH). Nke a sịntetik emepụta ọgwụ ọjọọ mara site ya ika aha "Firmagon". Ndị na-esonụ bụ nkọwa ya:
Klaasị Ọgwụ: Nkọwapụta GnRH; GnRH antagonist; Antigonadotropin
Usoro Chemical: C82H103ClN18O16
Ofzọ Maka Ọchịchị: Mịnye Subcutaneous
Nwepu: Feces (70-80%), urine (20-30%)
Nkebi Nkeji-Ndụ: 23-61 ụbọchị
A na-eji ntụ ntụ Degarelix agwọ ọrịa cancer prostate dị elu. FDA kwadoro ọgwụ maka ọgwụgwọ nke ọrịa cancer prostate dị elu na ndị ọrịa US na 24th Disemba, 2008. Na 17th Febụwarị, 2009, European Commission gbasoro usoro ma kwado ọgwụ ọgwụ Degarelix maka iji ya mee ihe na ụmụ nwoke toro eto nwere ọrịa prostate dị elu.
Rụba nke ahụ ama Degarelix ntụtụ Kwesịrị ịnwe dọkịta ma ọ bụ nọọsụ n'ụlọ ọgwụ. A nwekwara ike iji Degarelix mee ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, na Sweden, a na-amụ ọgwụ ahụ iji mee ihe dị ka ihe na-egbu egbu na-egbu egbu na-egbu egbu na ndị na-eme ya. A na-ahụkwa ọgwụgwọ Degarelix na-enye nwa ara dịka ọgwụgwọ ọzọ maka ọrịa ara ure na ụmụ nwoke.
Dọkịta gị nwere ike ịkwado ọgwụ a maka ọnọdụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n ’ejighị n’aka ihe kpatara ị na-a takingụ ọgwụ a, ọ dị mkpa ka ị gwa dọkịta gị. Dị ka ọ dị na ọgwụ ndị ọzọ, ịkwesighi inye onye ọzọ Degarelix, ọbụlagodi ma ha nwere otu ụdị akara ahụ ị nwere. Nke a bụ n’ihi na ọgwụ nwere ike ibute nsogbu ma ọ bụrụ na ewere ya n’ekwughi dọkịta ahụ.
(1) Ikwesiri ima ihe ozo tupu icho Degarelix
Ihe ndị a bụ ụfọdụ ihe dị mkpa ịmara tupu ị takingụ ọgwụ a:
Degarelix nwere ike bute nwoke infertility. Ọ bụrụ n’ile anya nna, ọdịnihu, ọ dị mkpa ka ị kpọọ dọkịta gị. I nwere ike ịtụle ịchekwa spam tupu ịmalite ọgwụgwọ.
Anabataghị ọgwụ a maka iji ụmụ nwanyị eme ihe. Womenmụ nwanyị dị ime ekwesịghị iji ọgwụ a. Nke a bụ n'ihi na ọgwụ nwere ike ibute nwa ebu n'afọ. Womenmụ nwanyị na-enye nwa ara, ma ọ bụ ndị bu n’obi ịmụ ụmụ, kwesịrị izere iji ọgwụ a. N'ezie, ụmụ nwanyị n'ozuzu ha ekwesịghị iji Degarelix.
Ọ nweghị nsogbu iwere Degarelix ma ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ahụike dị n'okpuru. Gbalịa ịkọrọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ogologo oge QT syndrome, nke bụ nsogbu obi na-adịghị ahụkebe nke nwere ike ibute nkụchi, nkụchi oge na-enweghị isi, ma ọ bụ ọnwụ mberede. Kwesịrị ịgwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa obi, akụrụ, ma ọ bụ ọrịa imeju. Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere sodium, magnesium, potassium, ma ọ bụ calcium na ọbara gị.
Ọ dịkwa mkpa ịgwa onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere nfụkasị ọgwụ na ọgwụ ụfọdụ. Nke a ga - enyere ha aka ịmata ma inwere ntụtụ Degarelix.
(2) Usoro ọgwụgwọ Degarelix
Degarelix na abia n'uzo abuo:
120 mg vial: vial a na-eji otu ọ bụla nwere 120 mg nke Degarelix ntụ ntụ dị ka Degarelix acetate.
80 mg vial: vial ọ bụla na-eji 80 mg nke Degarelix ntụ ntụ dị ka Degarelix acetate.
Degarelix na - abịa n'ụdị ntụ ntụ, nke a ga - agwakọta ya na mmiri ma gbanye ya n'okpuru anụ ahụ n'ime mpaghara afọ, ebe n'etiti ọgịrịga na ukwu. Oge izizi inweta ọgwụ a, a ga-enye gị ọgwụ ogbugba abụọ nke Degarelix. Mgbe usoro ọgwụgwọ Degarelix mbụ ahụ ga-amalite, ị ga-enweta naanị otu ntụtụ oge nlegharị anya ọnwa gị.
Usoro izizi bụ Degarelix 240 mg nke a na-ahụ anya dị ka XDX subcutaneous injections nke Degarelix 2 mg nke ọ bụla na mkpokọta 120 mg / mL. Mgbe usoro izizi ahụ gasịrị, ị ga-enweta naanị otu ntụtụ subcutaneous nke 40 mg na mkpokọta nke 80 mg / mL kwa ụbọchị 20.
Mgbe ị ga-anata ntụtụ Degarelix, ị ga-ezere iyi uwe dị larịị, akwa ma ọ bụ eriri gburugburu afọ gị ebe a ga-enye gị ọgwụ ntụtụ. Mgbe ị nwesịrị ọgwụ Degarelix, gbaa mbọ hụ na akwa ukwu gị ma ọ bụ eriri gị etinyeghị nrụgide na mpaghara ịgba ntụtụ. Ikwesiri izere ị rubacha ma ọ bụ kagbuo ebe ebe inyere ọgwụ ahụ nọ.
Treatgwọ ihe mgbaàmà nke ọrịa cancer a na-ejikọ nke testosterone maka uto na-achọ igbochi homonụ oge niile. Iji mezuo nke a, ọ dị oke mkpa na a ga-enyerịrị Degarelix acetate kpọmkwem dịka dọkịta gwara ya.
Iji hụ na ọgwụ Degarelix na-enyere ọnọdụ gị aka, ọ nwere ike ịdị gị mkpa inyocha ọbara kwa ụbọchị. Jide n'aka na ị ga-ejide dọkịta gị niile.
Ikwesiri iburu n’obi na inye Degarelix nwere ike imetụta nsonaazụ ụfọdụ nke ọgwụ. Ozugbo ịnọ n'okpuru ọgwụ a, jide n'aka na ị ga-agwa dọkịta gị na ị natala ọgwụ a mgbe ị na-eme nyocha ahụ na-esote.
Ekwuru na testosterone nwoke nwoke na-eme ka ọbawanye uto nke mkpụrụ ndụ kansa na prostate. Ọgwụ nke gbochiri ulepụta amịpụta testosterone ka amata n’ibe ma ọ bụ kwụsị uto nke mkpụrụ ndụ cancer n’ime prostate. E nwekwara ọgwụ ndị na-egbochi ọrụ nke testosterone site na ịbepụ nwantakịrị nwoke maka mkpụrụ ndụ kansa.
Degarelix ntụ ntụ (214766-78-6) na-arụ ọrụ site na ibelata ego nke testosterone na-emepụta site na ahụ. Ọ na-eme ya site na igbochi ndị na-anabata GnRH na pituitary gland na ụbụrụ. Nke a na - egbochi imepụta homonụ nke luiteinising, yabụ na - egbochi testes na - emepụta testosterone.
Dị nnọọ ka ọgwụ cancer ndị ọzọ, Degarelix nwere ike ịmekọrịta ọgwụ na ọgwụ ndị ọzọ. Ihe ndi a bu ufodu udiri ogwu nwere ike ime ka esee okwu mgbe ejikọtara ya na Degarelix:
Ọgwụ mgbochi ọgwụ
Proteinfọdụ protein protein na-egbochi
Ọgwụ nje Macrolide
Nhọrọ Serotonin Reuptake Inhibitors
Disopyramide, na ndị ọzọ.
Mgbe ejikọtara ọnụ ya na Degarelix, ọgwụ ụfọdụ nwere ike ịbawanye ohere nke ụdị ọgbụgba obi na-adịghị mma nke a maara dị ka QT ịgbatị. No n'ihe ize ndụ ka onodi onodu ojoo a na nsogbu ya ma oburu:
A bu onye agadi (65 ahogbo)
Nwee akụkọ ezinaụlọ nke ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa obi
Nwee akụkọ banyere ọnwụ obi mberede
Jiri nwayọ nwayọ ma ọ bụ obi gị nwee ume
Nwee ogologo ịmụ nwa site na oge etiti QT
Nwere ọrịa strok
Nwee calcium, magnesium, ma ọ bụ potassium nwere obere
Ọ bụrụ na ịnwere nke ọ bụla n'ime ọnọdụ ndị a dị n'elu, ma ọ bụ na-a certainụ ọgwụ ụfọdụ iji jikwaa ọnọdụ ahụike ọ bụla, ọ dị mkpa ka ị gwa dọkịta gị tupu ị usingụ ọgwụ Degarelix. Gbalịsie ike ịgwa onye na-ere ọgwụ gị ma ọ bụ dọkịta banyere ọgwụ a ga-enye gị, ọgwụ ndị ị na-ere, ọgwụ nri, nri ọgwụ na vitamin ị na-a takingụ ma ọ bụ na-eme atụmatụ. Nke a ga - enyere aka igbochi gị ọgwụ nwere ike ibute mmekọrịta Degarelix.
Ọ dị mkpa ka gị na dọkịta gị kparịta banyere ọnọdụ ahụike gị yana ọgwụ ị nwere ike ị na-ewere maka ọtụtụ ebumnuche. Nke mbu, o gha enyere dọkịta aka ka gi kparita gị otu iji ọgwụ a na ọgwụ ndị ọzọ nwere ike isi metụta ọnọdụ ahụike gị. Dọkịta gị ga-akọkwara gị etu ọnọdụ ahụike gị nwere ike isi metụta mgbakasị ahụ, yana ịdị mma nke Degarelix. Dọkịta gị ga-agwa gị ma ọ ga-adị mkpa ileba anya ọ bụla.
Enweghị ahụmịhe na-adakarị na nsogbu dị n'ihe metụtara ịnwe ma ọ bụ ịdoụbiga mmanya ókè na Degarelix. Ka o sina dị, ikwesighi ịkwụsị ị thisụ ọgwụ a n’ejighị dọkịta gị. Ọ bụrụ na ịmefughị ​​oge iji gbaa ntụtụ Degarelix gị, kpọọ dọkịta gị maka ndụmọdụ.
ebe ọ bụ na Degarelix acetate Dọkịta ga-enye gị ya, ọ dị ụkọ na ịdoụbiga mmanya ókè. N'ihe banyere oke nnyefere Degarelix, agbanyeghị, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ ebe nchịkwa nsị gị ma ọ bụ chọọ nlekọta ahụike ozugbo. Dịrị njikere igosi ma ọ bụ ịkọ ihe ị were, ego ole ị nara, na mgbe ị were ya.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ, Degarelix nwere ike ibute nsonaazụ dị iche iche. Nsonaazụ Degarelix nwere ike ịdị nwayọ ma ọ bụ sie ike, ha nwekwara ike ịdị nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide. Ihe ndi a bu ihe juru ebe nile Nsonaazụ Degarelix, nke otutu ndi mmadu n’abia na ogwu a adighi enweta.
Ibelata agba nke agba
Needba ụba nwere urin ugboro ugboro
Mmeghachi omume anụ ahụ na saịtị ịgba ahụ, dịka mgbu, nchapu, ike, ọzịza
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe mmetụta ndị dị na Degerelix dị n'elu adịghị njọ, ha nwere ike ibute nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na ha adịgide ruo ogologo oge. Ọ dị mkpa na ịchọrọ enyemaka ahụike ma ọ bụrụ na ị chọpụta ihe ndị a na-adịghị ahụkebe, mana nsogbu dị oke njọ:
Ọzịza na-adịghị ala ala
Ọkpụkpụ okpukpu ma ọ bụ ihe mgbu
Ahụ erughị ala ara na ọzịza
Mgbaàmà ndị dị ka ahụ ọkụ, dị ka ụkwara, ahụ ọkụ, afọ mgbu, na akpịrị mgbu
Spike na cholesterol ọbara
Spike na obara mgbali
Ebe ọ bụ na Degarelix na-ebelata mmepụta testosterone, ọ nwere ike ibute sel ọbara ọbara dị ala, ọnọdụ a maara dị ka anaemia. Ihe mgbaàmà nke anaemia gụnyere nsị, akpịrịkpa ahụ, ike ọgwụgwụ pụrụ iche na / ma ọ bụ ume mkpụmkpụ, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ dọkịta gị ozugbo. Dọkịta gị ga-eme nyocha ọbara n’oge site n’oge ruo n’oge iji nyochaa ọnụ ọgụgụ sel ọbara ọbara dị n’ọbara gị.
A na-ekwukwa na Degarelix na-abawanye ihe ize ndụ nke ọrịa shuga. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa shuga, ọ dị mkpa ka ị na-aga nyocha mgbe niile iji nyochaa ọkwa shuga ọbara gị.
A na-ekwukwa na Degarelix ga-eme ka ọrịa osteoporosis mụbaa. O nwere ike ime ka ọkpụkpụ ahụ dị gịrịgịrị ma gbajie mfe. Ọ bụrụ na ịnwere osteoporosis, ọ dị mkpa ka ị kọọrọ dọkịta gị ka o wee kpebie etu ọnọdụ ahụike gị nwere ike isi metụta Degarelix dosing.
Patientsfọdụ ndị ọrịa nwere ike ịnwe mmetụta Degarelix na-abụghị nke edepụtara n’elu. Ọ bụrụ na ị ga - enweta mgbaàmà ọ bụla na - eme ka ahụ erughị ala ma ọ bụ na - echegbu gị, ọ kacha mma ịhụ dọkịta gị n'egbughị oge.
Dọkịta gị nwere ike dụọ gị ọdụ ka ị kwụsị ị Deụ Degarelix injections ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe mgbaàmà nke nkụchi obi. Ihe mgbaàmà ndị a nwere ike ịgụnye mgbu obi na mberede, mgbu mgbu na azụ gị, mmetụta nke nrụgide ma ọ bụ ikechi obi, ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, ịsụsọ, na / ma ọ bụ nchekasị.
Dọkịta gị nwekwara ike dụọ gị ọdụ ka ị kwụsị iji Degarelix mee ya ọ bụrụ na inwee n ’akara banyere mmeghachi ahụ nfụkasị ahụ siri ike. Ihe mgbaàmà ndị a nwere ike gụnyere angioedema, bụ nke akwara ji hives, iku ume siri ike, na ọzịza ihu, ọnụ, aka na / ma ọ bụ ụkwụ.
E nwere dị iche Degarelix ịdọ aka ná ntị iburu n’uche. Otu n’ime ha bụ na ọgwụ a nwere ike ịgafe n’arụ mmiri (ọgbụgbọ, mmamịrị, ọsụsọ, feces). Yabụ, ị ga-ezere ikwe ka ahụ gị banye na aka gị ma ọ bụ akpụkpọ anụ onye ọzọ na akwa ọzọ na elekere elekere 48 ọbụlagodi mgbe ị nwesịrị ọgwụ Degarelix.
A na-adụ ndị na-elekọta gị ọdụ ka uwe mkpuchi rọba na-echebe mgbe na-ehicha mmiri nke onye ọrịa yana mgbe ị na-eji akwa ma ọ bụ akwa nhicha. Uwe ruru unyi na akwa ga-asachapụ iche na akwa ndị ọzọ.
Ezie na enwere ụfọdụ mmetụta Degarelix na-echegbu onwe gị, enwere ụfọdụ uru Degarelix na-elegara anya mgbe ị na-eji ọgwụ a. N'ime ihe omumu ihe omumu, gosiputara na inye Degarelix na-enye mbelata ngwa ngwa na ọkwa testosterone karịa ọgwụgwọ ọgwụgwọ homonụ ndị ọzọ. Ọgwụ a anaghị ebute ọgwụgwọ mbụ nke testosterone nke nwere ike ibute ọrịa mgbaàmà na-adịwanye njọ.
Ọzọ Degarelix abamuru bụ na a na-anabata ọgwụ ahụ n'ozuzu ya, ma e wezụga Otu ọmụmụ gosipụtara na mmeghachi omume na saịtị ahụ mere na 40 pasent nke amaokwu Degarelix otu akpọrọ <1 pasent nke otu leuprolide. Mmeghachi omume ndị a na-adịkarị nwayọọ ma ọ bụ na-adịchaghị mma, ha mekwara ọtụtụ mgbe mbido ọgwụ mbụ ahụ.
Ihe omuma nke mbu site na otutu ihe omumu nke ulo ogwu gosiputara na atụnyere ndi mmadu aghota LHRH, enwere njikọ Degarelix na oke nzoputa zuru oke na 1st afọ ọgwụgwọ. Eziokwu ahụ bụ na ohere ọ bụla ịgwọ ọrịa cancer na-aga nke ọma karịa mgbe ị na-eji usoro ọgwụgwọ a bụ otu n'ime uru Degarelix na-eme ka ọgwụ a bụrụ nke a ga-agba mbọ.
Degarelix na mmanya
Alcoholụ mmanya na obere ihe o yighị ka ọ na-emetụta abamuru ma ọ bụ nchekwa nke degharịa. Agbanyeghị, ị ga-ezere ị avoidụ nnukwu mmanya mgbe ị na-a thisụ ọgwụ a.
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ onye ị hụrụ n'anya nwere ọrịa kansa prostate, ihe ịrụ ụka adịghị ya bụ ọgwụ Degarelix bụ otu nhọrọ ọgwụgwọ kachasị mma ị nwere ike ịhọrọ. Naanị ebumnuche mere ị ga - eji họrọ ịwa ahụ maka ọgwụgwọ homonụ dịka Degarelix ga - akwụ ụgwọ. Agbanyeghị, ụgwọ ọ bụla dị iche ga-ekpuchi uru Degarelix.
8. Ihe omuma
Eleghị anya ị na-eche maka ego Degarelix. Ọnụ ego ọ bụla ọgwụgwọ na Degarelix kwa afọ bụ ihe dịka $ 4,400. Nke a kwekọrọ na ụgwọ ọgwụgwọ ọgwụgwọ ndị ọzọ dịnụ maka ọrịa kansa prostate dị elu. Ọnụ ntụtụ Degarelix maka ọgwụ 80 mg bụ ihe dị ka $ 519 maka ịnye otu ntụ ntụ maka ọgwụ. Ọnụ ego a ga-adabere na ụlọ ahịa ọgwụ ị gara.
I nwekwara ike ị gafee “Degarelix zụta n'ịntanetịMgbasa ozi. Ọ ga-adị mkpa ka ị kpachara anya mgbe ị na-azụ ọgwụ ahụ n'ịntanetị. Gbalịsie ike na ị na-eme nyocha ziri ezi na ịdị larịị tupu ị nye ọgwụ ahụ site na onye na-ere ịntanetị. Gbaa mbọ hụ na ndị na-ebubata ya ma ọ bụ ahịa ọgwụ dị n'ịntanetị ziri ezi yana na ihe ha na-ere bụ ụdị iwu dị ọcha ma dị ọcha.
A ga-echekwa Degarelix n'ụlọ okpomọkụ. Gbalia chebe ogwu a site na ihicha na mmiri. Dịka ọgwụ ndị ọzọ siri dị, debe Degarelix ka ụmụaka ghara iru.
Ewepula Degarelix uzuzu n’ime ahihia ma ọ bụ n’ime mmiri mkpofu, dịka n’ụlọ mposi ma ọ bụ na-agbada. Jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ iji wepu ọgwụ ndị emebiela ma ọ bụ adịghị eji ya.
Van Poppel H, Tombal B, et al (Ọktoba 2008). Degarelix: ihe odide nke na-ewepụta hormone (GnRH) nke na-ewepụta gonadotropin na-esi na otu afọ, ọtụtụ, enweghị usoro, usoro nyocha abụọ nke usoro ọgwụgwọ na ọgwụgwọ ọrịa cancer prostate. Eur. Urol. 54: 805-13.
Ọbá akwụkwọ United States nke Mahadum Nlekọta Ahụike, Nnyocha ike-ọnụ nke mpaghararelix n'ịgwọ ọrịa cancer na-akpata ọrịa prostate dị elu na United Kingdom, Lee D1, Porter J, Brereton N, Nielsen SK, 2014 Apr; 17 (4) ): 233-47.
Gittelman M, Pommerville PJ, Persson BE, et al (2008). Afọ 1, akara mepere emepe, usoro nyocha nke abụọ II na-achọpụta ihe gbasara mpaghararelix maka ọgwụgwọ nke ọrịa prostate na North America. J. Urol. 180: 1986-92.